65 vanyori vanosaina tsamba vachipesana naDonald Trump | Zvazvino Zvinyorwa
Mwedzi mitatu mushure mekukunda kwake muUnited States Sarudzo, Donald Trump iye atanga kuendesa yake chaiyo "humambo hwekutyisa" kubva kuWhite House, nevekupinda munyika ichive chinonyanya kukosheswa nemubhizimusi ave mutungamiriri. Mutemo mutsva unorwisa kupinda munyika unorambidza kupinda kunhengo dzenyika nomwe dzeMuslim-dzakawanda rave riri rekupedzisira parera remutungamiriri weasingaite toupee, chikonzero chakatungamira 65 vanyori uye maartist kubva kutenderera pasirese kusaina tsamba inopokana naDonald Trump umo kugadzirwa nekutaurirana zvinodzivirirwa pamusoro peparanoia uye kusanzwisisana.
Art uye zvematongerwo enyika
Munyori weNigeria Chimamanda Ngozi Adichie, mumwe wevanyori akaisirwa mutsamba yakasainwa kuna Donald Trump.
Vhiki mushure mekuuya kwake kuWhite House, VaDonald Trump vakamonera maoko avo ndokutanga kuzadzisa zvimwe zvezvivimbiso zvakawanda zvaange achizivisa nezvekupinda munyika, chekutanga chavo chiri kudzora kutama kwekufamba kubva kunomwe nyika dzeMuslim-zhinji kwemwedzi mitatu: Siria (ina mune iyi kesi), Libya, Iran, Sudan, Somalia, Iraq neYemen.. Kwemazuva makumi mapfumbamwe, hapana munhu kunze kwenzvimbo dzezvematongerwo enyika kubva kunyika idzi achakwanisa kupinda muUnited States kudzamara mitemo yese yekushambadzira yadzokororwa, saka matanho anogona kutonyanya kudenha mugore ra90.
Tichifunga nezvekurwiswa uko izvi zvinoreva kodzero dzevanhu uye nehunyanzvi senzira yekutaurirana uye kutaura munyika ine nhamo, musangano wevanyori nevanyori PEN yakatumirwa maawa mashoma apfuura tsamba yakanyorerwa Donald Trump yakasainwa nevanyori makumi matanhatu nevatanhatu, vanosanganisira JM Coetzee, Orhan Pamuk, Zadie Smith, Chimamanda Ngozi Adichie, Sandra Cisneros kana Lev Grossman, vazhinji vacho vanozivikanwa nebasa ravo pamisoro senge kudyidzana kwenyika, rusaruraganda kana kutama. Tsamba iyi inotaura kuti mutemo mutsva uyu, pamusoro pemamiriro ezvinhu akaipa aunomiririra kodzero dzevanhu, "unokanganisa kutenderera kwemahara kwevanyori uye vanofunga panguva iyo nhaurirano ine mutsindo uye yakasununguka yakakosha pakurwisa hugandanga neudzvanyiriri. Zvakare, tsamba yacho inonongedzera ku "kugona senzira yekurwisa kuzviparadzanisa, paranoia, kusanzwisisana uye kusashivirira kwechisimba."
Tsamba yacho, kuburikidza neEl País, unogona kuiverenga pazasi pamwe nemazita evatambi makumi matanhatu nevatanhatu vakasaina.
TSAMBA INOBVA KUVANHU
Mutungamiri Donald J. Trump
Anodiwa Mr. Mutungamiri:
Sevanyori uye maartist, tinobatana nePEN America mukuidaidzira kuti ibvise Executive Order yaNdira 27, 2017, uye kurega kuunza chero imwe nzira yekuyera iyo inokanganisa nerusununguko rwekufamba uye kuchinjana.
Nekurambidza vanhu vanobva munyika nomwe dzinonyanya kuve dzechiMuslim kupinda muUnited States kwemazuva makumi mapfumbamwe, kurambidza vapoteri vese kupinda munyika kwemazuva zana nemakumi maviri, uye kuvharidzira kutama kubva kuSyria zvachose, rake raJanuary Executive Order rakakonzera nyonganiso nekutambudzika. Kumhuri dzakakamurwa, kwakachinja hupenyu uye nekuremekedza kuremekedza mutemo pasi pekutyisidzirwa kwekusungwa maoko, kusungwa uye kudzingwa Nekuita izvi, Executive Order yakawedzera kutadzisa kufamba kwemahara kwevanyori uye vanofunga uye akazviita panguva iyo nhaurirano yakajeka uye yakavhurika yemitauro yakakosha pakurwisa hugandanga neudzvanyiriri. Kurambidzwa kwayo kunopesana nehunhu hweUnited States uye nerusununguko runodzivirirwa nenyika ino.
Iko kukanganisa kwakashata kweiyo yekutanga Executive Order kwakanzwikwa nekukasika, zvichikonzera kushushikana uye kusava nechokwadi kwevanyori vane mukurumbira pasi rese uye kukanganisa zviitiko zvakakosha zvetsika muUnited States. Oscar-akasarudzwa director Asghar Farhadi, chizvarwa cheIran, anga achitarisira kuenda kumhemberero yeAcademy Awards kupera kwaFebruary, akazivisa kuti haachapinda. Muimbi weSyria Omar Souleyman, uyo akaitisa mu2013 Nobel Peace Prize Concert muOslo, Norway, anogona kutadza kutamba kuWorld Music Institute kuBrooklyn muna Chivabvu 2017. Zvichida kuti Adonis, mudetembi wemakore 87 akapemberera pasi rese uyo ane Nyika yeFrance, asi iri yeSyria mavambo, inogona kuenda kuPEN's World Voices Festival muna Chivabvu 2017 muNew York, inoramba iri mukukahadzika.
Kudzivirira maartist epasi rose kubva mukupa kuhupenyu hwetsika neUnited States hakuzoite kuti nyika ive yakachengeteka uye inokuvadza mukurumbira wayo wepasirese uye simba. Mutemo wakadai haungodziviriri maartist makuru kuita munyika, asi zvakare inoganisira kuchinjaniswa kwemazano akakosha, kupatsanura United States mune zvematongerwo enyika nezvetsika. Kudzokorora zviito zvinopesana nevagari vekuAmerica, senge izvo zvakatotorwa nehurumende dzeIran neIraq, zvichawedzera kudzora kugona kwemaartist eAmerica kufamba akasununguka.
Unyanzvi netsika zvine simba rekubvumira vanhu kuti vaone kupfuura kwavo kusiyana. Kugadzira mushonga wekupedza kuzviparadzanisa, paranoia, kusanzwisisana, uye kusashivirira kwechisimba. Munyika dzakanyanya kubatwa nekurambidzwa kwekuenda kune dzimwe nyika, vanyori, maartist, vaimbi uye vagadziri vemafirimu vanogara vari pamberi mukurwira udzvanyiriri uye kutya. Kana ikakanganisa kugona kwevanyori kufamba, kuita uye kubatana, akadaro Executive Order inobatsira avo vanganyaradze mazwi akatsoropodza uye kuwedzera ruvengo runokonzera kupokana kwenyika.
Isu tinotenda zvakasimba kuti izvo zvino Sezvo iwe uchifunga zvingabvira matanho matsva, tinokukurudzira zvine ruremekedzo kuti uzvigadzirise zvakaringana kuti zvigadzirise chete kutyisidzira kuri pamutemo uye kwakasimbiswa uye kudzivirira kumisikidza kurambidzwa kwakanyanya kunokanganisa mamirioni avanhu, kusanganisira vanyori, maartist, uye vanofunga vane manzwi nekuvapo kwavo kunobatsira kusimudzira kunzwisisana kwenyika dzese.
Iwe unofungei nezve chirongwa ichi?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » 65 vanyori vanosaina tsamba vachipesana naDonald Trump
Kwakanaka danho. Zvinonzwisa tsitsi kuti murume uyu haafunge zvakanyanya ...